Dhalooyinka biyaha ugu fiican eeyaha: xayawaankaaga mar walba waa biyo | Eeyaha Adduunka
Encarni Arcoya | 22/09/2021 10:45 | Qalabka eyga
Markaad u baxayso socod ama orod, waxaad sida caadiga ah qaadataa dhalo biyo ah oo aad naftaada ku waraabiso si uusan jirkaagu u xanuunsan jimicsiga jirka ee aad sameyneyso. Xagga eyda sidoo kale waa lagama maarmaan, laakiin, Waa kuwee dhalooyinka eyda ugu fiican?
Hoos waxaan ku siinaynaa tusaalooyin dhalooyinka eyda ah iyo sidoo kale hage aad wax badan ka baran karto oo ku saabsan qalabkan aadka loo ilaaway oo haddana aad muhiim ugu ah xayawaankaaga iyo waraabinta.
1 Dhalooyinka biyaha ugu fiican eeyaha
2 Sida loo doorto dhalada biyaha eeyaha
3 Waa maxay sababta ay muhiim u tahay inaad u keento dhalo biyo ah eeyaha xilliga socodka
4 Goorma ayaan ku qasbannahay inaan siinno eeyga biyo?
5 Sida uu u shaqeeyo waraabka eeyga la qaadan karo
6 Ma qasab baa in dhalo biyo lagu qaado si loo nadiifiyo kaadida eyga waddada?
7 Halkee laga iibsan karaa dhalo biyo ah eeyaha
Dhalooyinka biyaha ugu fiican eeyaha
Halkaan waxaa ah xulashada dhalooyinka biyaha aan ugu jecelnahay eeyaha:
Dhalooyinka Makerfire ee ...
Dhalada Biyaha ee Flybiz ...
DZL- Dhalada Biyaha Eeyaha ...
Sida loo doorto dhalada biyaha eeyaha
Markaad u iibsanayso dhalo biyo ah eeyaha, waa inaad tixgelisaa dhowr astaamood si aad u saxdo. Waxa ugu muhiimsan iyo meesha aan kugula talineyno inaad fiiro gaar ah siiso, waa kuwan soo socda:
Awoodda: Awooddu waa mid ka mid ah furayaasha. Waa inaadan kaliya tixgelin xajmiga eygaaga iyo waqtiga socodka ama jimicsi aad samayn doontid, laakiin sidoo kale adeegsiga kale ee aad siin karto. Tusaale ahaan, waxaa loo isticmaali karaa cabitaanka biyaha, nadiifinta kaadida eeyaha, ka dhaadhicinta dabeecadaha aan habboonayn (qaylinta, isku dayga weerarka, iwm).
Waxyaabaha: Waxyaabaha caadiga ah ee dhalooyinka biyaha eeydu badanaa waa PVC, caag adag oo adkaysi leh oo ku hayn doona muddo dheer. Dhibaatadu waxay tahay, waqti ka dib, waxay yeelan kartaa ur. Ikhtiyaar kale ayaa ah ahama ama biraha, kaas oo sida caadiga ah ka nadaafad badan oo sahlan in la nadiifiyo oo jeermis dilo.
Iyada oo leh cabitaan la dhisay: Dhalooyinka biyaha qaarkood eeyaha ayaa leh nidaamyo cabitaan oo ku dhex jira, tusaale kuwa leh qaab qaaddo ama leh weel kaabayaal ah si biyo loogu buuxiyo.
Waa maxay sababta ay muhiim u tahay inaad u keento dhalo biyo ah eeyaha xilliga socodka
Markaad u lugaynayso, ama jimicsiga bannaanka, qaado dhalo biyo ah si aad u waraabiso. Dabcan, waxay leedahay faa'iidooyin badan oo dheeri ah, sida ka fogaanshaha muuqaalka nabarrada laga baqo, ama hagaajinta iska caabbinta jirka.
Xagga eyda, wax la mid ah ayaa dhaca. Waxay kaloo ku dadaalaan jir ahaan marka ay socdaan ama ordayaan, iyo Ma sugi karaan inay guriga yimaadaan si ay u cabbaan Gaar ahaan sababta oo ah waxaad abuuri kartaa dhibaato daran (marka eeydu si dhakhso ah u cabbaan, waxay yeelan karaan gaas, dhibaatooyin ceejin ama xitaa qalloocin caloosha, waxa ugu daran ee iyaga ku dhici kara).
Intaa waxaa dheer, dhaladaas biyaha ah waxay kaloo yeelan kartaa adeegsiyo kale, sida inay niyad jabiso xayawaankaaga haddii uu bilaabo inuu qayliyo ama rabo inuu ka hortago eey kale (ama ka ilaali kan kale isagoo biyo ku shubay); ama in la nadiifiyo kaadida eyga waddada.
Goorma ayaan ku qasbannahay inaan siinno eeyga biyo?
Eygu wuxuu u baahan doonaa biyo marka uu ooman yahay. Taasina waxay dhacdaa marka xayawaanku sameeyo jimicsi jireed, marka uu aad u kululaado, haddii uu xumad leeyahay ... Xataa haddii ay dheddig tahay, nuujinta, uurka ama kulaylka waxaa laga yaabaa inay u baahan tahay biyo ka badan waqtiyada kale.
Laakiin, adoo diiradda saaraya socodka iyo dhaqdhaqaaqyada isboortiga, waa inaad cab isaga ka hor intaadan bilaabin (qaddar yar oo had iyo jeer sug in yar ka hor intaadan bilaabin socodka ama jimicsiga si aysan u dareemin xumaan), markaad nasato (isla markiiba ma aha, laakiin xoogaa ka dib markay degto); iyo markaad guriga ku soo noqonayso (mar labaad taasi ma aha mid degdeg ah).
Waa muhiim inaad taas xusuusato eygu waa inuusan cabin isla markiiba jimicsiga kadib Maadaama, rabitaanka cabitaanka, uu kugu sababi karo matag ama wax ka xun inay dhacaan.
Sida uu u shaqeeyo waraabka eeyga la qaadan karo
Weligaa ma aragtay eey la qaadan karo oo waraabinaya? Kuwani caadi ahaan waxaa loo qaabeeyey laba siyaabood oo kala duwan. Dhinac ahaan, weel kaalmo ah oo aad biyo ka buuxin karto si xayawaanku u cabbo wuxuu doono. Tani waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku darto wax aad cunto haddii aad guriga ka maqnaanayso muddo dheer.
Dhanka kale, waxaad sidoo kale haysataa dhalooyinkii eyda oo leh nashqad u eg shamac, taas oo ah, way isku qoofalan yihiin si, adigoo gujinaya badhan, biyo ku soo ururaan si xayawaanku si fudud u cabbo.
Iyadoo ku xiran xajmiga eyga, hal nooc ama mid kale ayaa lagula talinayaa. Tusaale ahaan, haddii ay yar tahay ama dhexdhexaad tahay, dhalooyinka qaaddada ku jira ayaa ku filan waayo biyaha ku kaydsan ayaa ku filan. Laakiin haddii aad doonayso inay kaadida nadiifiso, cabto ama hagaajiso dabeecadaha, markaa mid weyn oo leh weelkiisa kaabayaasha ah ayaa ka fiican.
Ma qasab baa in dhalo biyo lagu qaado si loo nadiifiyo kaadida eyga waddada?
Tan iyo 2019 degmooyin badan, iyagoo isku dayaya inay hagaajiyaan bilicda (iyo urta) jidadka, wuxuu shuruud u dhigay milkiilayaasha eyga kuwaas oo ka koobnaa nadiifinta saxarada xayawaanka oo kaliya, laakiin sidoo kale in la sameeyo kaadida oo kale. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad keentaa wax si aad u nadiifiso kaadida eeygaaga.
Dhibaatadu waxay tahay in dhammaan degmooyinka aysan u baahnayn. Qaar baa sameeya, ganaaxyo gaaraya ilaa 750 euro haddii ay ku qabtaan adiga oo aan nadiifin; kuwa kalena ma sameeyaan. Tusaale ahaan, waa qasab in kaadida lagu nadiifiyo biyo (ama isku darka biyo iyo khal oo aad waxtar u leh) Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Almería, Ceuta, Jaén, Mieres ...
Waxaa ugu wanaagsan in la hubiyo in ay qasab tahay iyo in kale magaaladaada, iyo haddii ay sidaas tahay, had iyo jeer u qaado dhalo eeyaha.
Halkee laga iibsan karaa dhalo biyo ah eeyaha
Hadda oo aad wax badan ka ogaato shaqada dhalada biyaha eyga, iyo sababta ay tahay inaad mid u yeelato, waxa xiga ee aad u baahan tahay waa inaad ogaato meesha aad ka iibsan lahayd mid. Ma ku siinaa fursado? Halkan waxaan ku soo jeedineynaa dukaamada qaarkood oo aad ka heli karto.
Amazon: Amazon waa, shaki la'aan, dukaanka aad ka heli doonto kala duwanaansho badan, labadaba moodallo, kala duwan, cabbir, iwm. Qiimaheeda aad bay u kala duwan yihiin markaa waxay la jaanqaadi doontaa miisaaniyad kasta oo aad haysato.
Kiwoko: Xaaladdan waxaan ka hadlaynaa dukaan ku takhasusay qalabka xayawaanka iyo, dabcan, waxaad ka heli kartaa xoogaa dhalooyin ku habboon eeyaha iyadoo ku xiran cabbirka iyo waqtiga socodka aad siinayso xayawaankaaga.
Aliexpress: Ikhtiyaar kale, oo u eg Amazon, waa Aliexpress. Dhexdeeda qiimayaashu aad bay uga jaban yihiin dukaamada kale, laakiin waqtiga sugitaanku wuu dheer yahay. Sidaas oo ay tahay, haddii aadan degdeg ku jirin, waxaad kaydin kartaa xoogaa lacag ah marka aad iibsaneyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Qalabka eyga » Dhalada biyaha eey
Sariirta eyga kor loo qaaday